Noocyada kabaha ragga - Dharka Ragga ee leh Qaabka | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Calzado, fashion
Kabaha ayaa ah qalab muhiim ah si loo bixiyo sawirkaas oo nin waliba doonayo inuu bixiyo xarrago. Waa shay ay tahay in marwalba maskaxda lagu hayo waana inay noqdaan kuwo aan fiicnayn, nadiif ah oo cusub. Haddii saddexdaas eray la buuxin waayo, muuqaalkaaga oo dhan ayaa xumaan kara.
Guud ahaan Waxaa loogu talagalay ninka casriga ah, sidaa darteed waa la hagaajiyay oo aan la iloobin raaxada. Nin kastaa waa inuu ku haystaa ugu yaraan mid ka mid ah kabaha labadan qolkiisa, iyo inuu ogaado noocyada kala duwan ee jira, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad fiiriso dhammaantood:
2 Kabaha Oxford
3 Kabaha brogue
4 Kabaha Monk
5 Kabaha Nautic
7 Kabaha ama booties
Waxay yihiin kabo caynkaas ah waxay u taagan tahay raaxadeeda iyo qaab magaalo ahaan. Waxay ku habboon tahay munaasabad kasta oo gaar ah naqshadeeda darteed, maadaama aad labadaba u adeegsan karto inaad shaqo tagto, dhacdo muhiim ah ama safar asxaabta ah.
Si fiican u labis labadaba joonis iyo surwaal jilicsan iyo xitaa inaad uxirato si caadi ah, laakiin aan xad-dhaaf ahayn. Xilliga xagaaga waa ku habboon yihiin maxaa yeelay waa kabo aan kuleyl badan siinin, waa kaliya in la doorto dhar ku habboon waqtigan.
Kabahaas Waxay aad u qurux badan yihiin waxayna noqdeen kuwo moodada qarnigii XNUMXaad ardayda jaamacadda Oxford. Guud ahaan waxay ka samaysan yihiin maqaar waxa ugu badan ee ka soo baxa kabaha noocan ahna waa ku xidhka xargaha, wax ay jecel yihiin.
Noocyada kala duwan ee kabaha Oxford waa la kala soocay laga bilaabo kabo siman oo aan wax qurxin ah lahayn, ilaa kabo Halyeey halkaas oo aan ka arki karno wax ku dhufanaya darfaha dhexdiisa. Waxa kale oo jira Semi-brogue iyadoo lagu tolayo dunta dunta iyo suulasha kabaha ama Buuxi-buuxa oo leh qaabab dhibicyo ah oo ku yaal caaradda iyo baalasha.
Kabahaasi waxay isku dhafan yihiin wax kasta, laga bilaabo jooniska ilaa suudh qurux badan, oo ku habboon munaasabad kasta oo gaar ah, dibedda ula bixida asxaabta, qadada ama cashada, shaqada ama shirarka.
Qaabkeedu wuxuu na xasuusin karaa nooca kabaha Oxford ilaa iyo Waa kabo hoose, oo leh xargo, laakiin wax aan rasmi ahayn. Naqshaddiisa waxaa lagu calaamadeeyay godadka laga sameeyay labada suul iyo foosto.
Waxay yihiin cut classic iyo waxaa loo isticmaali karaa in loo labisto si xarrago leh. Iyagu waa kaabis ku habboon jiinis iyo suudh ama xitaa xoogaa qaab aan rasmi ahayn. Midabada ugu badan ee la isticmaalay waxay u dhexeysaa madow ilaa bunni waxayna ka samaysan yihiin maqaar.
Waxay yihiin kabo dhar aad u qurux badan, Ka samaysan waxyaabo kala duwan oo u dhexeeya maqaarka iyo suede qaabkiisuna wuxuu u muuqdaa mid aan lahayn xargo, laakiin hal ama laba xidho oo ku xidhan dhinaca kabaha.
Magaceedu wuxuu ka yimid erayga suufiya, oo suufiyadu waa kuwii ugu horreeyay ee xirta qaabkan kabaha ah illaa qarnigii XNUMXaad Waqtigan xaadirka ah waa in la ogaadaa inay ku soo gashay isla sawir, laakiin la cusbooneysiiyay, iyo Waa la cusbooneysiiyey si ay u awoodo inay labisto xarrago.
Kabahaani waa wax badan waana la gashan karaa jooniska iyo surwaalka dharka. Waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican oo leh dharka dharka iyo xarkaha maaddaama naqshadooda jilicsan ay fiicantahay. Haddii aad dooratid Monk madow, wuxuu si isku mid ah isugu dhafan doonaa ku dhowaad dhammaan midabbada midabka iyo haddii aad doorato midab bunni ah wuxuu la midoobi doonaa midabada buluug ama cawl
Waxaa loogu talagalay ninka isboortiga, Taabashadaas oo na xusuusinaysa kabahaas laga keenay aagagga xeebaha iyo badmaaxiinta. Waxaa lagu gartaa xirashada xargaha qaabkooduna wuxuu la socdaa dun xariiq ah oo ku teedsan wareegga kabaha oo dhan iyo xargaha qurxinta dhinacyada la gelinayo inta u dhexeysa eyelets
Waa in la xidho sharaabaad la'aan oo ay u istaagaan qabow xagaaga. Waxay ku samaysan yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin maqaar oo qaabka kelidii ayaa ah mid aad u caan ah maxaa yeelay waa bilaa simbiriirixan iyo iftiin. Waxay si fiican isugu xirmaan si xarrago leh oo caadi ah, oo leh joonis jilicsan ama surwaal jilicsan Iyo sidee bay u xirtaan xagaaga waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican oo leh gaab.
Kabahaasi waxaa lagu gartaa maxaa yeelay waa kabo isboorti, waa qaab isboorti waxaana jira noocyo badan oo ka doodaya sida isku dar naqshadeeda cayaaraha iyo xarrago. Tani waa kiiska Adidas, Nike, Balance Cusub ama noocyo caan ah sida Emporio Armani.
Kabaha noocan oo kale ah waxay si isku mid ah isugu daraan joonis iyo funaanado ama funaanad. Waxay horeyba ula yimaadeen naqshad gaar ah oo ay bixiyaan taabashadaas aan rasmiga ahayn, laakiin isla markaa ka taxaddara. Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato kabaha noocan ah? Guji isku xirkaan
Kabaha ama booties
Waxaa jira noocyo badan oo kabo ah oo loogu talagalay ragga, laga soo bilaabo tan ugu casrisan uguna quruxda badan leh maqaarkeeda, ilaa suede, fudud oo xadhig leh, sidoo kale loo yaqaan kabaha sararí o raadka.
Waxaa guud ahaan lagu sameeyaa a kalid aan-siibiil ah oo mar walba dhinac muuqda laga arki karo, iyo ku dhowaad dhammaantood waxay leeyihiin xargaha caadiga ah ama laga yaabee inay siibato dhinac ah. Waxay ku habboon yihiin inay xirtaan xilliga jiilaalka waxayna kaa ilaalinayaan qabowga iyo dharka munaasabad kasta iyo ku dhowaad dhammaan noocyada dharka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Noocyada kabaha ragga